အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများ၌မြင့်မားသောအာဟာရရှိသောအစားအစာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်သည်အဆိပ်သင့်ခြင်း။
int J ကို Biol သိပ္ပံ။ 2015; 11 (10): 1150-1159 ။
2015 သြဂုတ် 1 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.7150 / ijbs.12044
Jin Young Kim က,1 Jong-Ho သည် Lee က,1,✉ Doyun Kim က,1,2 Soung အဘိဓါန် Min Kim က,1 JaeHyung Koo,2 နှင့် Jeong Won Jahng1,✉
ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုနှင့်အာရုံကြောနှောင့်အယှက်ပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး Sprague-Dawley ခွေးများ (နယူးဟမ်းရှား) မွေးဖွား၏ပထမနှစ်ပတ် (က MS) စဉ်အတွင်း3ဇနေ့စဉ်ဘို့ရေကာတာကနေကွဲကွာသို့မဟုတ်ဘေးလွတ်သော left ခဲ့ကြသည်။ က MS အမျိုးသမီး၏ထက်ဝက်အပြင်ချောကလက်ကွတ်ကီးများကိုအခမဲ့ access ကိုလက်ခံရရှိ ကြော်ငြာ libitum postnatal နေ့က 28 ထံမှ Chow ။ ခွေးများငယ်ရွယ်လူကြီးစဉ်အတွင်းအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ စူးရှသောကဖိစီးမှု, ΔFosBနှင့်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) ကဦးနှောက်ကိုတိုင်းဒေသကြီးများတွင်အဆင့်ဆင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်ဖို့ပလာစမာ corticosterone တုံ့ပြန်မှု။ မြေတပြင်လုံးစမ်းသပ်ကာလအတွင်းစုစုပေါင်းကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ်စမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များစဉ်အတွင်း cookie access ကိုက MS အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့် anxiety- / စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးတက်လာသည်။ ΔFosBစကားရပ်လျော့နည်းသွားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့် BDNF က MS အမျိုးသမီး၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်း, ΔFosBစကားရပ်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အ BDNF နောက်ထပ် cookie ကို access ကိုအောက်ပါတိုးပွားလာခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ စူးရှသောကဖိစီးမှုမှ Corticosterone တုံ့ပြန်မှုကြောင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မပြုခဲ့က MS အတွေ့အကြုံနှင့် cookie ကို access ကိုအားဖြင့်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့သည်။ ရလဒ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cookie ကို access ကိုက MS အမျိုးသမီး၏စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုနှောင့်အယှက်တိုးတက်ကြောင်းအကြံပြုနှင့်ΔFosBနှင့် / သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens အတွက် BDNF စကားရပ်သည်၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
keywords: ငယ်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, Highly အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ, နျူကလိယ accumbens, အမျိုးသမီး
တူညီအစားအသောက်ထိန်းသိမ်းရေး၎င်းတို့စပ်ကြားမတူကွဲပြားတုံ့ပြန်မှုရှိနိုင်သည်ကိုသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ရှိပါသည်။ ယင်းမော်လီကျူးအဆင့်မှာကတူညီအစားအစာနှင့်ထိတွေ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်အကြား hippocampal transcriptome ၏လိင် dimorphic တုံ့ပြန်မှုရှိတယ်လို့သရုပ်ပြခဲ့ပြီး 1။ အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် / neuroendocrine အဆင့်တွင်အမျိုးသမီးကြွက်တစ်ကြာရှည်မြင့်မားတဲ့အဆီအစားအသောက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသော hypothalamic neuropeptide တုံ့ပြန်မှုပြ2ယောက်ျားတစ်ဦးမွငျ့မား lipid ရောက်လာလျော်ကြေးပေးဖို့ထက်နှင့်အဆင့်မြင့်စွမ်းရည် 3။ တိုတောင်းသောသက်တမ်းမြင့်မားတဲ့အဆီ-အောင်ကျွေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကတော့ hippocampus အတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးယောက်ျားကနေနောက်ဆက်တွဲစိတ်ဖိစီးမှုမှကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန် 4, 5။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးများတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စဉ်အခါ, အမူအကျင့်အဆင့်မှာအဆီအစားအသောက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းထိတွေ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့နည်းစေနှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်ရှာဖွေရေးတိုးပွါး 6။ အပျိုဖော်ဝင်တိုးလာ endocrine plasticity နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာအလွန်အရေးပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါသည် 7။ လေ့လာရေးမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ Post-နို့တစ်လိင် dimorphic ထုံးစံ၌စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြုပြီနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်အားဖြင့် Basal HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံကာစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ endocrine တုံ့ပြန်မှုနိုင်သည်ကိုအကြံပြုခဲ့ကြ 8, 9. ကျနော်တို့အရင်ကသော်လည်းမမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာကြာရှည်သုံးစွဲမှုအထီးကြွက်များတွင် anxiety- နှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးပွါးကြောင်းတွေ့ကြပြီs 10။ အဆီမြင့်မားကော်ဖီဆိုင်အစားအစာ (32% အဆီအကြောင်းအရာ) ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှုယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးမြတ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဤလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုအလားတူမိခင်ခွဲခြာ (က MS) protocol ကိုအကြောင်းမဲ့ကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်အခကျအခဲ, တိုးတက် 11။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးက MS ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိအဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine အခကျအခဲ 12 အထီးက MS ကြွက်များတွင်သူတွေကိုကှာခွားထငျရှား 13, 14.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုအလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာကြာရှည်သုံးစွဲနိုင်တဲ့အလယ်အလတ်အဆီဓာတ်စာ (~ 21% အဆီ) တွင် 6, 15, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များစဉ်အတွင်းအထီးက MS ကြွက်အချို့စိုးရိမ်စိတ်-related လက္ခဏာတွေနှင့် HPA ဝင်ရိုးကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုးတက် 14။ လေ့လာရေးစိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး function ကို၏မော်ဂျူအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်အားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါကဖြစ်၏ အဆီတစ်အလွန်အမင်းနှစ်သက်အစားအသောက်များတွင်မြင့်မားသောထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုလျှော့ချရန်အကြံပြုခဲ့သည် 16; အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျေနပ်မှု, ခံစားခြင်း, အလိုဆန္ဒအဖြစ်ကိုပိုမိုသာယာသောစိတ်ခံစားမှုခဲ့ 17 နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် immunological ဖိစီးအောက်ပါစာနာတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွား 18, စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းပမာဏထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအောက်ပါ 19 ကြွက်များတွင်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်စဉ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ 20။ က anxiety- ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူသာတိုးတက်ပေမဲ့သို့သော်ဤလေ့လာမှု၌, အလယ်အလတ်အဆီဓာတ်စာ (~ 21% အဆီ) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များကာလအတွင်းက MS အမျိုးသမီး၏ HPA ဝင်ရိုးကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုးတက်စေခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS အမျိုးသမီးအတွက်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာရရှိမှု၏စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုသက်ရောက်အခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် (BDNF) နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့် (NAc) ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ NAc တစ် mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းရန်တစ် Basal forebrain ဖွဲ့စည်းပုံ, ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားဖြည့်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ် 21။ anhedonia ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာ, အ NAc အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထားတဲ့အတွက်အကျိုးကိုလမ်းကြောင်း၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှ ascribed ထားပြီး 22, 23။ အဆိုပါ NAc အာရုံခံအမူအကျင့်စိတ်ဖိစီးမှုပါရာဒိုင်းတုံ့ပြန် activated နေကြတယ် 24, 25နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန််ပတ်သက်နေကြပြီ 26, 27။ အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic လှုပ်ရှားမှုနှင့် NAc အာရုံခံ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် activation စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့အပြုအမူပြသသောငါတို့အထီးက MS ကြွက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ကြသည် 13, 28။ BDNF အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်၏မော်ဂျူမှတဆင့် hedonic နို့တိုက်ကျွေးရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့အကြံပြုခဲ့သည် 29, 30နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့ D1 အဆိုပါ NAc အတွက် binding BDNF နှင့်ΔFosBအဆင့်ဆင့်နှင့် dopamine အဲဒီ receptor တိုးလာ 16, 31, 32.
Sprague-Dawley ကြွက် (Samtako ဇီဝ, Osan, ကိုရီးယား) ဝယ်ယူခြင်း, အပူချိန်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်မှု (22 ± 1 ℃) နဲ့တိကျတဲ့-ရောဂါပိုး-အခမဲ့အတားအဆီးဧရိယာထဲမှာဂရုစိုက်, စိုထိုင်းဆ (55%), နှင့်တစ်ဦး 12 / 12 နာရီခဲ့ကြသည် အလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာ (အလင်းအိမ်-အပေါ် 07 မှာ: 00 လေး) ။ စံဓာတ်ခွဲခန်းအစားအစာ (Purina ကြွက် Chow, Purina Co. , ဆိုးလ်, ကိုရီးယား) နှင့်အမြှေးပါး filtered စင်ကြယ်သောရေကိုမရရှိနိုင်ခဲ့ကြ ကြော်ငြာ libitum။ တိရစ္ဆာန်များဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက် NIH လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၏ကိုရီးယားအကယ်ဒမီတည်းဖြတ်တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှု, 2000, များအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကိုအတိုင်းဂရုစိုက်ခဲ့ 1996 ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
စမ်းသပ် protocol ကို
ကနေမလိုလားအပ်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆွ minimize နှင့်စံဖို့ Nulliparous အမျိုးသမီးနှင့်သက်သေပြမျိုးဆက်များအထီးတိရစ္ဆာန်စက်ရုံ၏ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်မွေးမြူများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသဖြင့်, ခွေးများထိန်းချုပ်ထားသောထုံးစံ၌ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ကြ သန္ဓေသားဘအတွက် ဘဝ။ ပို့ဆောင်မှုအတည်ပြုပြီးနောက်ဆယျ့နှစျနာရီ [postnatal နေ့က (PND) 1] ကျနော်တို့အရင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ခွေးများခြယ်လှယ်ခဲ့ကြသည် 13, 14, 33 - 35။ အမှိုက်သရိုက်များအားတစ်ခုချင်းစီကိုမိခင်ခွဲခြင်း (MS) အုပ်စုအတွက်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိသော (NH) အုပ်စုအတွက်ဖြစ်စေတာဝန်ပေးသည်။ MS ကျောင်းသားများကိုသူတို့၏ရေကာတာနှင့်အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှဖယ်ထုတ်ပြီးမနက် ၉း၀၀ - ၁၂း၀၀ နာရီအတွင်းသစ်သားပြားများ (Aspen shaving, Animal JS Bedding, Cheongyang, Korea) ဖြင့်အိပ်ထားသည့်လှောင်အိမ်အသစ်တွင်အတူတကွထားရှိပြီးသူတို့၏နေအိမ်သို့ပြန်သွားသည်။ လှောင်အိမ်နှင့်ရေကာတာ။ ခွေးများကိုခွဲထားသည့်ကာလအတွင်းနွေးထွေးစေရန်နောက်ထပ်ကုသမှုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ MS ကို PND9မှ ၁၄ မှနေ့စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် PND ၂၂ ရက်နေ့မှနို့မထွက်မှီတိုင်အောင်အရုပ်များသည်၎င်းတို့၏ရေကာတာနှင့်အတူမကျန်တော့ဘဲကျန်ခဲ့ကြသည်။ NH အုပ်စုသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပုံမှန်လှောင်အိမ်သန့်ရှင်းရေးမှအပနို့ရည်မပြည့်မှီမှီတိုင်အောင်နို့မို့မနေနိုင်ဖြစ်နေသည်။ နို့တိုက်သည့်နေ့၌ NH နှင့် MS အမျိုးသမီး ၄ ဦး ကို NH (သို့) MS အမှိုက်သရိုက်များမှကျပန်းရွေးချယ်ပြီး ၂ လုံး NH သို့မဟုတ် ၂ ခု MS ကလေးများကိုလှောင်အိမ်တစ်ခုစီတွင်နေရာချသည်။ အတူတကွနေထိုင်သောအမျိုးသမီးငယ်လေးနှစ်ယောက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအစားအစာ (HPF) (Oreo cookie၊ Kraft Foods Global, Inc, East Hanover, NJ, USA) ကိုအခမဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ကြော်ငြာ libitum PND 28 (က MS + HPF အုပ်စုကို) မှ Chow, နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမှိုက်သရိုက်အတွက်ကြွင်းသောအရာ2အမျိုးသမီးက MS ခွေးများ (က MS အုပ်စုကို) နှင့်နယူးဟမ်းရှားခွေးများ (နယူးဟမ်းရှားအုပ်စုသည်) သာစံ Chow ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စံ Chow နှင့် Oreo cookie ရဲ့အာဟာရဖွဲ့စည်းမှုဖော်မြူလာဇယားမှာပြသ Table1.1။ နေ့စဉ်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ကိုယ်အလေးချိန် PND 29 ကနေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ 24 ဇအစားအစာစားသုံးမှု၏အကဲဖြတ်ဘို့, Chow နှင့် cookies တွေကို၏ premeasured ပမာဏကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်, နက်ဖြန်နေ့၌ Chow နှင့် cookies တွေကို၏လက်ဝဲငွေပမာဏကိုယခင်နေ့၌ပေးအပ်တန်ဖိုးအနေဖြင့်အလေးချိန်ချိန်တွယ်အရေအတွက်ကိုနုတ်ခံခဲ့ရသည်။ အထူးစောင့်ရှောက်မှု spillage ပါဝင်သည်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကယ်လိုရီစားသုံးမှု Chow နှင့် cookies များကိုများ၏အာဟာရဖွဲ့စည်းမှုဖော်မြူလာအရသိရသည်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလှောင်အိမ်ထဲမှာခွေးများအားဖြင့်စားသုံးအစားအစာစုစုပေါင်းပမာဏချင်းစီလှောင်အိမ်ထဲမှာခွေးများများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲခဲ့ကြနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတွက်ချက်တန်ဖိုးကိုဎ = 1 အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ရေအားလုံးစမ်းသပ်အုပ်စုများမှလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ခဲ့, နှင့်အစားအစာအခြေအနေများတပြင်လုံးကိုစမ်းသပ်ကာလတလျှောက်လုံးဆက်လက်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ဆဲ protocol ၏သိထားပုံပုံထဲမှာသည် Figure11.
စမ်းသပ် protocol ကို။
စံ Chow နှင့် Oreo ကွတ်ကီးထဲမှာအာဟာရ contents တွေကို (%)
(တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စု 8 ကွဲပြားခြားနားသောအမှိုက်သရိုက်များထံမှဎ = 4; 24 ကွဲပြားခြားနားသောအမှိုက်သရိုက်များအနေဖြင့်စုစုပေါင်း 8 ခွေးများ) နယူးဟမ်းရှား, က MS နဲ့ MS + HPF အမျိုးသမီး PND 54 ပေါ်တွင်လူနာစမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတွင်ကြွက်လှုပ်ရှားမှုကိုအခန်းထဲက (အရှည် 43.2 စင်တီမီတာ, အကျယ်အတွက် 42.2 စင်တီမီတာနှင့်အမြင့် 30.5 စင်တီမီတာ, Med Associates မှ, VT, အမေရိကန်နိုင်ငံ), နှစျယောကျအလျားလိုက်လေယာဉ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးတစ်ပွင့်လင်း acrylic အခန်းထဲက၏ဗဟို၌ထားခဲ့ပါတယ် ထဲတွင်နေရာ 16 အနီအောက်ရောင်ခြည် photocell-detector အားလုံး x, y ရှုထောင်, ဆိတ်ကွယ်ရာ 2.5 စင်တီမီတာလှပတဲ့, နှင့်၎င်း၏လူနာလှုပ်ရှားမှု 30 မိများအတွက်ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုအခန်း၏အလင်းကိုအခွအေနေနေ့က-အလင်းအခွအေနေအောက်မှာတိရိစ္ဆာန်ခန်းအားဖြင့်ထိုအတူပြင်းထန်မှုမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ လူနာလှုပ်ရှားမှု session ကိုမိတစ်ခုချင်းစီဆက်တိုက်5စဉ်အတွင်းအလျားလိုက်အာရုံခံကိရိယာအတွက်ရောင်ခြည်ကြားဖြတ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်အဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည်။ ကျင်ကြီးစွန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီကြွက်များ၏လူနာတင်ယာဉ်ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း fecal boli ၏အလေးချိန်အဖြစ်ကောင်းစွာသွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြောကျမတို့လှုပ်ရှားမှုထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်; ဆိုလိုသည်မှာ forepaw နှင့်ဦးခေါင်းဖြီးလိမ်းပုံ rostral ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်, ခြေထောက်နှင့် caudal ဖြီးလိမ်းပုံအဖြစ်အမြီး / လိင်အင်္ဂါဖြီးလိမ်းပုံအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည် 36။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုအခန်းထဲကယခင်ကစမ်းသပ်ပြီးကြွက်မဆို olfactory တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အသီးအသီးကိုအသုံးပြုခြင်းပြီးနောက် 70% အီသနောနှင့်အတူသန့်စင်ခဲ့သည်။
နှစ်ရက်ကတော့လူနာလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှု (PND 56) ပြီးနောက်, ကြွက်တစ်ဦးမွငျ့မားသောပေါင်းဝင်္အတွက်အမူအကျင့်အကဲဖြတ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်နှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ပွင့်လင်းလက်နက် (အကျယ်အရှည်နှင့် 50 စင်တီမီတာအတွက် 10 စင်တီမီတာ) နဲ့ပေါင်း shaped acrylic ဝင်္နှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ပိတ်ထား လက်နက် (အရှည် 50 စင်တီမီတာ, အကျယ်အတွက် 10 စင်တီမီတာနှင့်အမြင့် 31 စင်တီမီတာ), (10 စင်တီမီတာ x ကို 10 စင်တီမီတာ) ဗဟိုပလက်ဖောင်းထံမှထွက်တိုးချဲ့။ မြေတပြင်လုံးယန္တရား 50 စင်တီမီတာကြမ်းပြင်အထက်သို့ခြီးမွှောကျခဲ့သညျ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် 37။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်ဖွင့်လက်နက်တဦးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝင်္၏ဗဟို၌ထား, ပြီးတော့5မိများအတွက်ဝင်္များ၏ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်လက်နက်စူးစမ်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ မတူညီသောလက်နက်အတွက်သုံးစွဲအချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လေးယက်တိကျတဲ့လက်မောင်းများတွင်သုံးစွဲသည့်အချိန်ရဲ့ start အချက်ပြအရာ, အသီးအသီးလက်မောင်းမှအဝင်ဝလိုင်းအတွင်းမှဖြစ်ခဲ့ရတယ်, လူအပေါင်းတို့လေးယက်ထပ်လိုင်းအပြင်ဘက်သောအခါပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်အချိန်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဝင်္ယခင်ကစမ်းသပ်ပြီးကြွက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှကာကွယ်ရန်တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက် 70% အီသနောနှင့်အတူသန့်စင်ခဲ့သည်။
သုံးရက်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်မှု (PND 59) ပြီးနောက်ကြွက်ယခင်ကဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း, အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် 38။ ကြွက်တစ်ကောင်စီကို ၅၀ မိနစ်အတွင်းအနက် ၄၀ စင်တီမီတာ (၂၃-၂၅ ℃) တွင်ရေဖြည့်ထားသောဖန်ဆလင်ဒါ (အမြင့် ၅၄ စင်တီမီတာနှင့်အချင်း ၂၄ စင်တီမီတာ) တွင်ရေကူးခွင့်ပြုခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုများကိုဗီဒီယိုကင်မရာမှမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ဆလင်ဒါ၏ဘေးထွက်။ ကြွက်များတွင်ရေထဲတွင်မရွေ့နိုင်သည့်ကြာချိန်ကိုсекундနာရီတစ်လုံးဖြင့်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေများမှရရှိသည်။ မတည်မငြိမ်နိုင်မှုကိုကြွက်များအားရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင်ထားရန်လိုအပ်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုသာပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
ကြွက်ကြိုတင်မလိုချင်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှု minimize စီစမ်းသပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုအခန်းထဲမှာအနည်းဆုံး2ဇ၌ထားကြ၏အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အမူအကျင့်အကဲဖြတ်9အကြားဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်: ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ကှဲလှဲ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှရှောင်ရှားရန်ထိုနေ့၏ 00 pm တွင်: 12 လေးနှင့် 00 ။ အမူအကျင့်အမှတ်ပေးအဆိုပါကြွက်များ၏ကုသမှု၏လေ့လာသူမျက်စိကန်းနှင့်အတူပြုလေ၏။
အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုများပြီးဆုံးပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ကြွက်များကိုခြေလက်လေးချောင်းဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သော်လည်းသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားကိုမပြောင်းလဲနိုင်အောင် ၂ နာရီခန့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအကွက်ထဲတွင်ထားခဲ့သည်။ ၃၀၊ ၆၀၊ ၁၂၀ မိနစ်အချိန်များတွင်အမြီးကိုသွေးစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထိန်းထားသည့်ကာလအတွင်း ၂၀ မိနစ် rpm2တွင် centrifuged ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပလာစမာနမူနာများကိုနိုက်ထရိုဂျင်အရည်ဖြင့်အေးခဲစေပြီးအကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်အထိ - ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်သိုလှောင်ထားသည်။ corticosterone ၏ပလာစမာအဆင့်ကို radioimmunoassay အသုံးပြု၍ ဆုံးဖြတ်သည် 125ကုတ်အင်္ကျီ-A-အရေအတွက်ကိရိယာအစုံ (Siemens,, CA, USA) ငါ-ကပ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ assay ၏ sensitivity ကို 5.7ng / ml ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် assay ကိန်း 4-12.2% ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများမှနုံနိတ်ကြွက်များ (အုပ်စုတစ်စုစီတွင်အမှိုက်ပုံ ၃ ခုမှ ၆ ခု၊ မတူညီသောအမှိုက် ၆ ခုမှစုစုပေါင်း ၁၈ ကောင်) သည် PND ၆၂ တွင် ဦး နှောက်ဒေသများရှိ blFosB နှင့် BDNF အဆင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သည်။ Retroperitoneal အဆီ pads များကိုယဇ်ပူဇော်သည့်အချိန်တွင်ကောက်ယူခဲ့ပြီး ဦး နှောက်ကို decapitation ပြီးနောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ နျူကလိယ accumbens (NAc) နှင့် hippocampus တို့၏တစ်ရှူးနမူနာများကိုရေခဲတွင်အလွယ်တကူခွဲစိတ်ပြီးနိုက်ထရိုဂျင်အရည်တွင်အေးခဲစေပြီးအသုံးပြုသည်အထိ - ၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်သိုလှောင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်နည်းလမ်းအတိုင်း NAc တစ်သျှူးခွဲစိတ်မှုကိုကောင်းမွန်သောဓါးဖြင့်အသုံးပြုသည် 28, 39; သို့သော်အနီးအနား ventro-medial striatum တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှပါဝင်ရှောင်ကြဉ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဆိုပါတစ်ရှူးတစ်ခုတည်းဆပ်ပြာ lysis ကြားခံ (; 50 MM NaCl; 8.0% ထရီ X-150; 1 MM Tris, သော pH 100 protease နှင့် phosphatase inhibitor ကော့တေး 0.5%) အတွက် homogenized ခဲ့ကြသည်ပြီးတော့ 13,000 မှာ 20 မိဘို့4ဂရမ်မှာ centrifugedoC. အသစ်ပြွန်များထဲသို့ပြောင်းသွားသည့် supernatants များကိုပရိုတင်းပါဝင်မှုအတွက်တိုင်းတာပြီးပရိုတိန်းစစ်ဆေးမှုကိရိယာ (Biorad DC, Biorad, Inc. , Hercules, CA) ကို အသုံးပြု၍ lysis ကြားခံ၏ 80 μg / 20 μlအာရုံစူးစိုက်မှုတွင် aliquoted နှင့်သိုလှောင်ခဲ့သည် - 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သည်ထိုနေ့တွင်ပင်အသုံးပြုသည်။ နမူနာများကို load buffer (100 mM Tris, pH 6.8; 200 mM dithiothreitol; 4% SDS; 20% glycerol; 0.2% bromophenol blue) နှင့် 1: 1 dilution တွင် ၅ မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ၊ ရေခဲတွင်လျင်မြန်စွာအေးပြီး၊ 5% SDS-polyacrylamide Tris-glycine ဂျယ်လ်အပေါ် electrophorazed ။ nitrocellulose အမြှေးပါးများ (Hybond-C, Amersham, Bucks, UK) သို့လွှဲပြောင်းပေးသောပရိုတိန်းများကို 12X Tris-buffered saline-Tween (5 mM C) တွင် ၅% အဆီမဟုတ်သောနို့ရည်ဖြင့်ကုသခဲ့သည်။4H11NO3; 0.145 M က NaCl; 0.2% SDS; 0.1 မှာ 20% Tween 4) နေ့ချင်းညချင်း0C. အမြှေးပါးများသည် polyclonal ယုန်ဆန့်ကျင်သော -FosB (၁: ၁၀၀၀ dilution; Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ၊ Dallas, TX, USA) နှင့် BDNF (1: 1000 dilution; Millipore, Temecula, CA, USA) နှင့်နှင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်ထားသောညွှန်ကြားချက်များ (Lumi-light အနောက်ပိုင်းချေမှုန်းမှုအလွှာ; Roche, Indianapolis, IN, USA) အရခန္ဓာကိုယ်ရှိပodိပစ္စည်းများကို chemiluminescence ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ် (LAS-1, Fuji film, Tokyo, Japan) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာ၏ Digitized တန်ဖိုးများကိုထိန်းချုပ်β-actin မှပုံမှန်ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့အားလုံးတန်ဖိုးများကို NH အုပ်စု၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးမှဆွေမျိုးတန်ဖိုးများကိုကူးပြောင်းခဲ့သည်။
ဒေတာကို one- သို့မဟုတ်နှစ်ခု-လမ်း [corticosterone ဒေတာများကသုံးသပ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ကုသမှု (ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်အစားအသောက်အခြေအနေ2အဆင့်ဆင့်ချင်းစီ) X ကိုအချိန်ကှဲလှဲ၏ (4 အဆင့်ဆင့်)] ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA), နှင့်အုပ်စုများအကြား preplanned နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် post ကို hoc Fisher's PLSD စစ်ဆေးမှုကို StatView software (Abacus, Berkeley, CA, USA) ကို သုံး၍ လိုအပ်ပါက။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအချက်အလက်များအား ထပ်မံ၍ ANOVA ၏တိုင်းတာမှုများအားဖြင့်ထပ်မံလေ့လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် Bonferroni အားပြန်လည်ပြုပြင်သည် P တန်ဖိုးအားညှိနှိုင်းမှု။ အဓိပ်ပာယျ၏အဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် P <0.05, အပေါင်းတို့တန်ဖိုးများကို SEM ±နည်းလမ်းအဖြစ်တင်ပြခဲ့ကြသည်
PND 39 နှင့်အလေးချိန်ခြားနားချက်အဲဒီနောက်ရှုလေ့လာမခံခဲ့ရသည်အထိက MS အမျိုးသမီးပုံ (အသက်-ကိုက်ညီနယူးဟမ်းရှားအမျိုးသမီးထက်ပိုမိုပေါ့ပါးဖြစ်ထငျရှား (Figure2A) .2တစ်ဦးက) ။ စာရင်းအင်းများသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (P<0.05) NH နှင့် MS အမျိုးသမီးများအကြား PND 32 - 39 အတွင်း PND 36 နှင့် 37 မှလွဲ၍ လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အစားအစာရရှိမှုသည် MS အတွေ့အကြုံကြောင့်အလေးချိန်ကွာခြားမှုကိုလျော့နည်းစေပြီး PND ၃၆ ပြီးနောက် NH နှင့် MS + HPF အကြားစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ANOVA ၏တွေ့ရှိချက်များအရအချိန်နှင့်အမျှကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းသည် MS နှင့် MS + HPF အကြားခြားနားကြောင်းတွေ့ရသည်။F(1,780) = 2.146; P= 0.0008] မဟုတ်နယူးဟမ်းရှားနဲ့ MS အကြား။ က MS အမျိုးသမီး၏နေ့စဉ် Chow စားသုံးမှုအသက်-ကိုက်ညီနယူးဟမ်းရှားအမျိုးသမီး (ပုံကှာခွားဘူး (Figure2B) .2ခ) ကွတ်ကီးအသုံးပြုမှုသည် MS အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်စားသုံးမှုကိုဖိနှိပ်သော်လည်းနေ့စဉ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုသည်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များမရှိဘဲကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတူကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ANOVA သည်မိခင်ခွဲထားခြင်းနှင့်အစားအစာအခြေအနေတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ကာလတစ်ခုလုံးအတွင်းစုစုပေါင်းကယ်လိုရီစားသုံးမှု (PND 28 - 62) သည်စမ်းသပ်အုပ်စုများနှင့်မတူပါ။ (Figure2C) .2ကို C) ​​။ က MS + HPF အမျိုးသမီးများကစားသုံးစုစုပေါင်းကယ်လိုရီ၏အကြောင်း 40% ကို cookies များကိုတခုမှ (Chow ကနေ 3259.921 ± 211.657 kcal, 2184.641 cookies များကိုထံမှ 186.077 kcal ±) ။ PND 62 အပေါ်က MS အမျိုးသမီး၏ Retroperitoneal အဆီ pad ပါ (အသက်-ကိုက်ညီနယူးဟမ်းရှားအမျိုးသမီးကှာခွားနှင့်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုမပါဘဲ cookie ကို access ကိုနှင့်အတူတိုးပွားလာခံရဖို့တော်မှာဘူးP= 0.0833, က MS + HPF vs. က MS) (ပုံ (Figure22D)
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ် (က), Chow နှင့်ကယ်လိုရီ (ခ), စုစုပေါင်းကယ်လိုရီစားသုံးမှု (C) နှင့် retroperitoneal အဆီ pad ပါ (ဃ) ၏အလေးချိန်၏နေ့စဉ်စားသုံးမှု။ နယူးဟမ်းရှား; Chow သာ, က MS နှင့်အတူအောင်ကျွေး Non-ကိုင်တွယ်; မိခင်ခွဲခြာသာ Chow, က MS + HPF နှင့်အတူတိုက်ကျွေး; မိခင်ခွဲခြာ Chow နှင့်အတူတိုက်ကျွေး ...
NH, MS နှင့် MS + HPF အမျိုးသမီးများ၏လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှားမှုများကို PND ၅၄ ရှိကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်မှုခန်းမတစ်ခုတွင်တိုင်းတာသည်။ ပထမအကြိမ် (၀ - ၁၅ မိနစ်) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် (၁၅ မှ ၃၀ မိနစ်) အတွင်း MS အမျိုးသမီးများ၏အရေအတွက်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ NH အမျိုးသမီးနှင့်အတူ; သို့သော်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်း (P<0.05) NH နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက MS + HPF အုပ်စုတွင်နောက်မှသာပြုလုပ်သောလေ့လာမှုပြုလုပ်ချိန်တွင်တွေ့ရှိရသည် (Figure3A) .3တစ်ဦးက) ။ session ကိုမိပထမဦးဆုံး 15 စဉ်အတွင်းခရီးထွက်စုစုပေါင်းအကွာအဝေးသိသိသာသာက MS အတွက်ယုတ်လျော့ခဲ့သည် (P<0.05), သို့သော် MS + HPF မဟုတ်ပါ၊ NH နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (ပုံ (Figure3B) .3B က) ။ မြောကျမတို့အပြုအမူနှင့်ကျင်ကြီးစွန်လှုပ်ရှားမှုဟာလူနာလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှု (ပုံစဉ်အတွင်းသွင်းယူပေးခဲ့သည် (Figure3C3C & D) ။ MS အတွေ့အကြုံက rostral grooming ကိုသိသိသာသာတိုးစေတယ် (P<0.05, NH vs. MS) ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းက၎င်းကိုလျှော့ချပေးသည်။P<0.05, MS vs. MS + HPF) (ပုံ (Figure3C) .3ကို C) ​​။ က MS အမျိုးသမီးကျင်ကြီးစွန်လှုပ်ရှားမှု (သိသိသာသာကိုလျော့ကျစာရင်းအင်းအရေးပါမှုနှင့် cookie ကိုလက်လှမ်းမပါဘဲနယူးဟမ်းရှားရန်ဆွေမျိုးတိုးမြှင့်ခံရဖို့တော်မှာP<0.05, MS vs. MS + HPF) (ပုံ (Figure33D)
လူနာလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ် PND 54 အပေါ်ဖျော်ဖြေ။ လူနာအရေအတွက်ဆက်တိုက်မှာတိုင်း5မိ session ကိုသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါလူနာလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှု၏ 30 မိစဉ်အတွင်းမြောကျမတို့အပြုအမူတွေနှင့်ကျင်ကြီးစွန်လှုပ်ရှားမှုသွင်းယူခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်းလူနာအရေအတွက် (က) နှင့်ခရီးထွက် ...
နောက်ထပ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအကဲဖြတ်ရန်ရန်အလို့ငှာ, ကြွက်2ရက်လူနာလှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှု (PND 56) အပြီးတစ်ဦးမွငျ့မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဖွင့်လက်မောင်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်သိသိသာသာက MS အမျိုးသမီးအတွက်ယုတ်လျော့ခဲ့သည် (P <0.05), သို့သော် MS + HPF မဟုတ်ပါ၊ NH နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (ပုံ (Figure4A) .4တစ်ဦးက) ။ ရာခိုင်နှုန်းကိုပွင့်လင်းလက်မောင်း entry ကိုစမ်းသပ်အုပ်စုများ (ပုံအကြားကွဲပြားဘူး (Figure4B) .4B က) ။ စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအကဲဖြတ်ရန်, ကြွက်3ရက်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်မှု (PND 59) ပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ် session ရဲ့5မိစဉ်အတွင်း Immobility ကြာချိန်သိသိသာသာ (က MS အမျိုးသမီးအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်P <0.05) ကို NH နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်၊ MS + HPF အမျိုးသမီးများ၏ရွေ့ပြောင်းနိုင်မှုရမှတ်သည် NH နှင့်မတူပါ။ (Figure44ကို C) ​​။
အချိန်အတွက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်မှု (A, B) နှင့်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှု (C) စဉ်အတွင်း immobility စဉ်အတွင်းလက်နက်ဖွင့်လှစ်ရန် entry ကို။ ကြွက် PND 56 နှင့် PND 59 အပေါ်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအပေါ်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ နယူးဟမ်းရှား; Non-ကိုင်တွယ်သာ Chow နှင့်အတူတိုက်ကျွေး, ...
plasma corticosterone အဆင့်ဆင့်
တစ်ဦးကအပတ်ကရေကူးစမ်းသပ်ပြီးနောက်ကြွက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုလက်ခံရရှိနှင့်အမြီးသွေးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း session ရဲ့0ဇစဉ်အတွင်း 30, 60, 120 နှင့်2မိအချိန်အချက်များမှာစုဆောင်းခဲ့ကြခြင်း, (ပုံဟာပလာစမာ corticosterone assay အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် (Figure5) .5) ။ အဆိုပါ Basal corticosterone အဆင့်ဆင့် (0 အချိန်အချက်) ကအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားဘဲ, သို့သော် corticosterone အဆင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုး (စိတ်ဖိစီးမှုစတင်ခြင်းပြီးနောက် 30 နှင့် 60 မိအချိန်အချက်များမှာနယူးဟမ်းရှားထက်က MS အမျိုးသမီးအတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြP<0.05, တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အမှတ်မှာ NH vs. က MS vs. ) ။ MS + HPF ၏ပလာစမာ corticosterone အဆင့်များသည်စိတ်ဖိစီးမှုစတင်ပြီးနောက်မိနစ် ၃၀ တွင် NH နှင့်မကွာခြားသော်လည်း ၆၀ မိနစ်အချိန်တွင် NH ထက်နိမ့်သည် (P <0.05; 394.29 ± NH အတွက် 38.35 ng / ml vs. MS + HPF အတွက် 247.48 ± 24.57 ng / ml) ။ 2- လမ်း ANOVA နှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင် corticosterone အဆင့်ဆင့်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမိခင်ခွဲခြာ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများထင်ရှားF(1,56) = 8.814, P= 0.0045] နှင့်အချိန် [F(3,56) = 9.335, P<0.0001] နှင့်အစားအစာအခြေအနေမျှအကျိုးသက်ရောက်မှု။ မိခင်ခွဲခြာနှင့်အချိန်အကြားသို့မဟုတ်အစားအစာအခြေအနေနှင့်အချိန်အကြားသိသာသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုမတွေ့ရပါ။
ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း session ရဲ့2ဇစဉ်အတွင်း plasma corticosterone အဆင့်ဆင့်။ ကြွက်ဟာအတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏တစ်ပါတ်အောက်ပါထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ နို့တိုက်ကျွေးရေးအခြေအနေပြန်လည်နာလန်ထူကာလအတွင်းဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြွက်ဟာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း box ထဲမှာထားကြ၏ ...
ΔFosBနှင့် BDNF အနောက်ပိုင်းချေ
အဆိုပါ NAc အတွက်ΔFosBနှင့် BDNF အဆင့်ဆင့် (ပုံအနောက်ပိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူလေ့လာခဲ့ကြ (Figure6) .6) ။ ΔFosBသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့် BDNF (က MS အမျိုးသမီး၏ NAc အတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်P <0.05) NH (ပုံ။ ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (Figure6A6A & B) ။ MS MS အမျိုးသမီးများ NAC တွင် FosB အဆင့်ကို cookie များမှပုံမှန်ရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ NH နှင့် MS + HPF နှင့် BDNF အဆင့်အကြားကွာခြားမှုမရှိပါ။P <0.05, MS vs. MS + HPF) ။ က MS အမျိုးသမီးများ၏ Hippocampus အတွက် BDNF အဆင့်သိသိသာသာ NH ဆွေမျိုး (။P <0.05) ၎င်းကိုကွတ်ကီးများမှပြန်လည်ရယူခြင်း (ပုံ) ကိုကြည့်။ မရပါ (Figure66ကို C) ​​။
အနောက်တိုင်းချေသည့် hippocampus (C) ထဲမှာ NAc (A, B) နှင့် BDNF အဆင့်အတွက်ΔFosBနှင့် BDNF အဆင့်ဆင့်၏လေ့လာဆန်းစစ်။ အဆိုပါအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုကနေရင်တော့မှားမယ်ဖြစ်ကြောင်းကြွက်အနောက်ပိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်တစ်ရှူးနမူနာကိုစုဆောင်းရန် PND 62 အပေါ်ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ နယူးဟမ်းရှား; ...
အာခေါင်အစားအစာရရှိမှုက MS အမျိုးသမီး၏စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုအပြုအမူတွေကိုတိုးတက်
ထိုကဲ့သို့သောလူနာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကိုယ်စားပြုဒီလေ့လာမှုမှာအမူအကျင့်ရမှတ်များ, လှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်ကာလအတွင်း rostral ဖြီးလိမ်းပုံနှင့်ကျင်ကြီးစွန်လှုပ်ရှားမှု; ပွင့်လင်းလက်နက်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္စမ်းသပ်ကာလအတွင်းနေထိုင်ရန်; အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်ကာလအတွင်း immobility, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များစဉ်အတွင်း Oreo ကွတ်ကီးများကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူက MS အမျိုးသမီးအတွက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ က MS အထီးအစီရင်ခံအဖြစ်စူးရှသောကဖိစီးမှုမှအဆိုပါ corticosterone တုံ့ပြန်မှု, က MS အမျိုးသမီးအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့သည် 14။ အဆိုပါတုံး corticosterone တုံ့ပြန်မှုက MS အတွေ့အကြုံ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ဟန်; စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုစိန်ခေါ်မှုဖို့ HPA ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုနာတာရှည်အထပ်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အတွေ့အကြုံများကိုအောက်ပါကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေအားထင်ရှားကတည်းကအကြိမ်ကြိမ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုလိုသည်မှာအတွေ့အကြုံ, 40, 41။ လေ့လာရေးအဆီအတွက်အလွန်အမင်းနှစ်သက်အစားအသောက်များတွင်မြင့်မားသောထိတွေ့သည့် Basal HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်မွမ်းမံကာစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုဖို့ endocrine တုံ့ပြန်မှုနိုင်သည်ကိုအကြံပြု 9, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် 17, 19 နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့ 18, 20။ ဒါ့အပြင် Oreo ကွတ်ကီးများ (~ 21% အဆီအကြောင်းအရာ; တစ်အလယ်အလတ်အဆီဓာတ်စာ) ကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များစဉ်အတွင်းအထီးက MS ကြွက်များတွင်တုံး HPA ဝင်ရိုး function ကိုနှင့်တိုးတက်လာသောစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူပုံမှန် 14။ ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်သက် cookie ကို access ကိုအစောပိုင်းအသက်တာ၌က MS အတွေ့အကြုံ, ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်တုံး HPA ဝင်ရိုး function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, နှင့်အပြုအမူအခကျအခဲ ameliorate စေခြင်းငှါဖွယ်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှု၌, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များအတွင်း cookie ကို access ကိုအမျိုးသမီးက MS ကြွက်များတွင်စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်သည့် HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာအထီးက MS ကြွက်ခဲ့သော်လည်းအမျိုးသမီးက MS ကြွက်များတွင် anxiolytic နှင့် / သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် cookie ကိုလက်လှမ်း၏လက္ခဏာထိရောက်မှုသည် HPA ဝင်ရိုး function ကိုအတူ related မည်မဟုတ်ပါကြောင်းအကြံပြုသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်မြောက်မြားစွာ neuroendocrine နှင့်အမူအကျင့်မှာ parameters အတွက်ကွာခြားခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုမှအားနည်းချက်ကျားမမှီခိုဖြစ်ပါသည် 42, 43။ ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခု7ရက်ကြာအလယ်အလတ်အဆီဓာတ်စာ protocol ကိုတစ်ဦးစူးရှသောကဖိစီးမှုကအောက်ပါအထီး-ရွေးချယ်ပုံကြီးချဲ့ corticosterone လွှတ်ပေးရန်မှဦးဆောင်ကြောင်းအစီရင်ခံ 6.
အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ NAc အတွက်အာခေါင်အစားအစာရရှိမှုနှင့်အာရုံခံ function ကို
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုΔFosBစကားရပ်လျော့နည်းသွားကြောင်းသရုပ်ပြနှင့် BDNF က MS အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်အမျိုးသမီးကြွက်များ၏ NAc အတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စေစိတ်ဖိစီးမှုဟာ NAc အတွက်ΔFosBစကားရပ်တိုးပွါးကြောင်းအစီရင်ခံထားသည် 44-46။ လေ့လာရေးကူးယူအချက်ΔFosBအဆိုပါ NAc အာရုံခံအတွက် BDNF စကားရပ်နှင့်အတူဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ 32, 47-49။ အတူတူယူပါကΔFosBလျော့နည်းသွားနှင့် NAc အတွက် BDNF စကားရပ်ဖြစ်နိုင်သည် NAc အာရုံခံ function ကိုပြောင်းလဲပစ်စောစောအသက်တာ၌က MS စိတ်ဖိစီးမှု၏ရေရှည်အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်တိုးပွားလာကြောင်းအကြံပြုသည်။ အဆိုပါ NAc အာရုံခံ function ကိုအပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုပါရာဒိုင်းခြင်းဖြင့် modulated ခံရဖို့အကြံပြုခဲ့သည် 24, 25 နှင့်၎င်း၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန််ပတ်သက်နေထားပြီး 22, 23, 26, 27။ အမှန်မှာထို NAc အတွက်တိုးမြှင့် BDNF အချက်ပြစိတ်ကျရောဂါ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မော်ဒယ်များအစီရင်ခံထားသည် 50-52နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှု Over-ဖော်ပြ striatum အတွက်ΔFosBကြွက်တွေမှာကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့သည် 53။ ထို့ကွောငျ့ depression- နှင့် / သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးက MS ကြွက်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အတူ related စေခြင်းငှါΔFosBလျော့နည်းသွားနှင့် NAc အတွက် BDNF စကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။
ဤလေ့လာမှု၌, ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်း cookie ကို access ကိုအမျိုးသမီးက MS ကြွက်များတွင်ΔFosBနှင့် BDNF အသုံးအနှုန်းတွေတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ရလဒ် NAc အတွက်ΔFosB၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်အတွက်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်ရလဒ်များကိုမှထိတွေ့ဖေါ်ပြခြင်းယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ concurs 31နှင့်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ Over-ဖော်ပြကြွက်ΔFosB၏ NAc အတွက် BDNF အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်း 32။ striatum အတွက်ΔFosBစကားရပ်တိုးပွားလာကြောင်းယခင်အစီရင်ခံစာထှနျးစဉ်းစားစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုမှခံနိုင်ရည်ပြုပြင် 53ဒါကြောင့် cookie ကိုလက်လှမ်းနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏က MS အမျိုးသမီး၏ NAc အတွက်ΔFosBတိုးပွားလာကြောင်းကောက်ချက်ချသည်, ယင်း၏ Basal အဆင့်အထိဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်, ထိုလက္ခဏာနှင့် / သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် cookie ကိုလက်လှမ်း၏ anxiolytic ထိရောက်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ NAc အတွက်တိုးမြှင့် BDNF အချက်ပြစိတ်ကျရောဂါမော်ဒယ်များအတွက်အများအားဖြင့်အစီရင်ခံခဲ့သည်ကတည်းက cookie ကို access ကိုအတူက MS အမျိုးသမီး၏ NAc အတွက်တိုးမြှင့် BDNF အဆင့်ကို၎င်း၏လက္ခဏာနှင့် anxiolytic ဆိုးကျိုးများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး 50-52ဒါပေမယ့်မရှိသလောက်လက္ခဏာမော်ဒယ်များ၌တည်၏။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
အဆိုပါ hippocampal BDNF အဆင့်ဆင့်အပေါ်က MS နှင့် HPF ၏ဆိုးကျိုးများ
လျော့နည်းသွားသည့် hippocampus အတွက် BDNF အဆင့်ကိုဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုအလားတူက MS protocol ကိုအကြောင်းမဲ့ခဲ့သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်နှစ်ဦးစလုံးအစီရင်ခံထားသည် 54, 55။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, BDNF အဆင့်ကိုဆွေမျိုးနယူးဟမ်းရှားရန်ဤလေ့လာမှုကိုထိန်းချုပ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးက MS ကြွက်များ၏ hippocampus အတွက်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ Hippocampal neurogenesis စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ၏လက္ခဏာများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး 56, 57, ထို hippocampus ကောင်းစွာ HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှု၏တုံ့ပြန်ချက်စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများသည်။ အဆိုပါ HPA လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS အမျိုးသမီးအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ပြန်ခေါ်က hippocampus အတွက် BDNF အဆင့်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်တုံး HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူစပ်လျဉ်းအတွက်က MS အတွေ့အကြုံကိုနေဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါမမှန််ပတ်သက်နေစေခြင်းငှါလျော့နည်းသွားကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါ hippocampal BDNF အဆင့်နှင့်ငါတို့က MS အမျိုးသမီးအတွက် HPA ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုအကြား ဆက်စပ်. နောက်ထပ် cookie ကို access ကိုဤလေ့လာမှု၌သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (32% အဆီ) ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှုကဒီလေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ကြောင်းအလားတူက MS protocol ကိုအကြောင်းမဲ့အထီးက MS ကြွက်များ၏ hippocampus အတွက် BDNF စကားရပ်တိုးပွါးကြောင်းပြသ 58။ အထီးက MS ကြွက်များ၏ hippocampal BDNF အဆင့်ဆင့်အပေါ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (~ 21% အဆီ) စဉ်အတွင်း cookie ကိုလက်လှမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
Oreo ကွတ်ကီးထဲမှာအဆီ / သကြားရဲ့ contents ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ
ဤလေ့လာမှု၌, Oreo ကွတ်ကီးများကိုအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုအခကျအခဲတိုးတက်လာသည်။ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Oreo cookie ကိုအဆီမြင့်မားပေမယ့်လည်းသကြားအတွက်မြင့်မားတဲ့မသာတဲ့ချောကလက် cookie ကိုဖြစ်ပါသည် Table1.1။ အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုကြားနေနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်တွေ့ရှိခဲ့သည်သော်လည်းလူ့လေ့လာမှု၌, ချောကလက်စားခြင်း, သောက်သုံးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအနုတ်စိတ်ဓါတ်များလျှော့ချ 59။ နဲ့ချောကလက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်အောင်သည့်စိတ်ဓါတ်များချိုမြိန်အရေးပါတယ်လို့အစာစားစမ်းသပ်သွေးဆောင်အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်တိုးတက်ကြောင်းအကြံပြု, ချောကလက် (လွင်ပြင်ချောကလက် vs. နို့ချောကလက်) ၏အာခေါင်အပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။ ဒါဟာ sucrose တဏှာနာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တိုးပွါးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်နှင့်အရေးပါတယ်လို့နို့ချောကလက်တဏှာစိတ်ဓာတ်ခံစားချက်နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အထူးသတိုးပွါး 60။ အားလုံး Chow အပြင် sucrose နှင့် / သို့မဟုတ်ဝက်ဆီအခမဲ့ရွေးချယ်မှုစူးရှသောကဖိစီးမှုမှစိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု modulated 61။ တစ်ဦးလိင် dimorphic ထုံးစံ၌သွေးဆောင် neuroendocrine နှင့်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲ; တစ်အလယ်အလတ်အဆီဓာတ်စာ (Oreo ကွတ်ကီးများကိုနဲ့အတူအလားတူအဆီအကြောင်းအရာ 20% ပြောင်းဖူးရေနံ) မှဒါ့အပြင်ရေတိုရေရှည်ထိတွေ့မှု 4-6။ အတူတူယူပါက Oreo ကွတ်ကီးများကို၏သကြားနဲ့အဆီပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများက MS အမျိုးသမီးအတွက်အာရုံကြောနဲ့အပြုအမူအခကျအခဲတိုးတက်လာဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြအံ့သောငှါကောက်ချက်ချသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ Oreo cookie ကိုလက်လှမ်းအဖြစ်အဆီသို့မဟုတ်သကြားပြဌာန်းချက်၏တူညီသောငွေပမာဏကဒီလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိက MS အမျိုးသမီးအလားတူတိုးတက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်မယ်ဆိုရင်ဆနျးစစျဖို့မျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ retroperitoneal အဆီသိုလှောင်ရုံဒီလေ့လာမှုမှာ cookie ကို access ကိုအားဖြင့်က MS အမျိုးသမီးအတွက်တိုးမြှင့်ခံရဖို့တော်မှာ။ စိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး function ကိုအပေါ်မော်ဂျူအကျိုးသက်ရောက်မှုအပြင်, အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ access ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်အဆီသိုလှောင်ရုံနှင့်အတူပျံ့နှံ့နေတဲ့ leptin နှင့်အင်ဆူလင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့် 15, 61။ leptin နှင့်အင်ဆူလင်နှစ်ဦးစလုံးဟာ meso-limbic ဆုလာဘ်စနစ်ကတစ်ဦးစည်းမျဉ်း function ကိုကွိုးစားအားထုမှအကြံပြုထားသည်နှင့်အထူးသဖြင့်အင်ဆူလင်ဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine ပို့ဆောင်ရေးစကားရပ်တိုးလာ 62, 63။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, meso-limbic ဆုလာဘ် system ကိုအလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုး function ကိုအတူစပ်လျဉ်းအတွက်စိတ်ပညာစိတ်ခံစားမှုမမှန််ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ် 22-27။ ထို့ကြောင့်တဲမော်ဂျူရှိလျှင်, တိုးမြှင့အဆီသိုလှောင်ရုံနှင့်အတူတိုးပွားလာ leptin နှင့် / သို့မဟုတ်အင်ဆူလင်အားဖြင့် meso-limbic ဆုလာဘ်စနစ်တွင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာရရှိမှုအားဖြင့်ခံစားချက်မြင့်တစ်အခန်းကဏ္ဍမှအကြံပြုထားသည်။ အမှန်စင်စစ်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (32% အဆီအကြောင်းအရာ) ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှုစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျှော့ချနှင့်ဤလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုအလားတူက MS protocol ကိုအကြောင်းမဲ့ကြောင်းအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်သိသိသာသာတိုးပွားလာအဆီသိုလှောင်ရုံနှင့်အတူပလာစမာ leptin နှင့်အင်ဆူလင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့် 11။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ cookie ကိုလက်လှမ်းတို့က retroperitoneal အဆီသိုလှောင်ရုံအတွက်ကြောင့်တိုး, cookie ကို access ကို (~ 21% အဆီအကြောင်းအရာနဲ့အလယ်အလတ်အဆီဓာတ်စာ) နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့က MS အမျိုးသမီးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်အမူအကျင့်တိုးတက်မှုတိုးမြှင့အဆီသိုလှောင်ရုံနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်မသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး တစ်ဦးစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိဖို့နှင့်ထပ်မံမပျံ့နှံ့နေတဲ့ leptin မဟုတ်သလိုအင်ဆူလင်မကလက်ရှိလေ့လာမှုမှာတိုင်းတာခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်သည် HPA ဝင်ရိုးထဲမှာအလုပ်မဖြစ်သည် NAc အာရုံခံ, နှင့် hippocampus မွေးဖွား၏ပထမနှစ်ပတ်စဉ်အတွင်းမိခင်ခွဲခြာ၏အတှေ့အကွုံအားဖြင့်ငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးက MS ကြွက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုအခကျအခဲ်ပတ်သက်နေခံရဖို့ထင်ရှား။ , မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်များကာလအတွင်းအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ, တစ်ဦးအလယ်အလတ်အဆီအစားအသောက်များတွင်အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ anxiety- နဲ့ MS အမျိုးသမီးအတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးတက်လျက်, NAc အာရုံခံအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မော်ဂျူက၎င်း၏နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားများအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
စာရေးသူစမ်းသပ်နည်းစနစ်နှင့်အတူစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေါက်တာ JY Lee ကအတူအကူအညီတောင်းဒေါက်တာ SB Yoo ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (2013R1A1A3A04-006580) မှနှင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကသက်ကြီးရွယ်အိုများအားများအတွက် Oromaxillofacial အလုပ်မဖြစ်သုတေသနစင်တာ (2014050477) ကိုကိုရီးယားအစိုးရ (သိပ္ပံဝန်ကြီးဌာန, အိုင်စီတီနှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်း) ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှတဆင့်ထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ မာတင် B, Pearson က M, Brenneman R. et al ။ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်း၏ hippocampal transcriptomes အပေါ်အစားအသောက်စွမ်းအင်စားသုံးမှု၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ PLOS ONE ။ 2008; 3: e2398 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ Priego T က, Sa'nchez J ကို, Pico' C. et al ။ ကြွက်များတွင် High-အဆီအစားအသောက်များတွင်ထိတွေ့မှုအောက်တွင် hyperphagia ၏ induction နှင့်အတူ related အဆိုပါ leptin နှင့် ghrelin စနစ်များအတွက်လိင်-ဆက်စပ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Horm ပြုမူနေ။ 2009; 55: 33-40 ။ [PubMed]
3 ။ Priego T က, Sa'nchez J ကို, Pico' C. et al ။ high-အဆီဓာတ်စာတုံ့ပြန်ဇီဝြဖစ်-related မျိုးဗီဇ၏လိင်-differential ကိုစကားရပ်။ အဝလွန်ခြင်း။ 2008; 16: 819-26 ။ [PubMed]
4 ။ Kitraki အီး, Soulis, G, တိုတောင်းတဲ့သက်တမ်းအဆီ-ကြွယ်ဝပြည့်စုံအစားအစာအောက်ပါစိတ်ဖိစီးမှုမှ Gerozissis K. ချို့တဲ့ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ Neuroendocrinology ။ 2004; 79: 338-45 ။ [PubMed]
5 ။ Soulis, G, Kitraki E ကို, အတန်အသင့်အဆီထဲမှာကြွယ်ဝပြည့်စုံအစားအစာအောက်ပါအမျိုးသမီးကြွက်များတွင် Gerozissis K. အစောပိုင်း neuroendocrine ပွောငျးလဲ။ cell Mol Neurobiol ။ 2005; 25: 869-80 ။ [PubMed]
6 ။ Soulis, G, Papalexi အီး, Kittas C. et al ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တစ်ဦးအဆီ-ကြွယ်ဝပြည့်စုံအစားအစာများ၏အစောပိုင်းသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121: 483-90 ။ [PubMed]
7 ။ Romeo RD, McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2006; 1094: 202-14 ။ [PubMed]
8. Boukouvalas, G, Antoniou K ကို, Papalexi အီး et al ။ နို့နှင့်နို့တိုက်သည့်အစာများသည်မြင့်မားစွာအစာကျွေးခြင်းအားဖြင့်ကြွက်များ၏အပြုအမူနှင့် hypothalamic pituitary adrenal axis တို့ကိုအပျိုဖော်ဝင်စအစတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပျက်သောပုံစံဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008; 153: 373-82 ။ [PubMed]
9 ။ Boukouvalas, G, Gerozissis K ကို Markaki အီး et al ။ high-အဆီနို့တိုက်ကျွေးရေးတခုစူးရှသောကဖိစီးမှုမှ pubertal ကြွက်များ၏ endocrine တုံ့ပြန်မှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Neuroendocrinology ။ 2010; 92: 235-45 ။ [PubMed]
10 ။ Jahng JW ကင်မ် JY, Lee က JY, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သော်လည်းမအမျိုးသမီးအတွက်, ယောက်ျားအတွက် anxiety- နှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးပွားစေပါသည်။ AChemS2013 Abstract ။
11 ။ Maniam J ကို, မောရစ် MJ ။ အာခေါင်ကော်ဖီဆိုင်အစားအစာတစ်ခုဆိုးရွားသောအစောပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကအောက်ပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ ameliorates ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2010; 35: 717-28 ။ [PubMed]
12 ။ Yoo SB ကင်မ် BT ကင်မ် JY ။ et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် fluoxetine အဆိုပါ raphe-hippocampus ဝင်ရိုးထဲမှာ serotonergic လှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးနှင့်မွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာကြုံတွေ့ကြောင်းအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2013; 38: 777-88 ။ [PubMed]
13 ။ Lee က JH ကင်မ် HJ ကင်မ် JG ။ et al ။ စိတ်ကျရောဂါအပြုအမူတွေနှင့်မွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာကြုံတွေ့ကြောင်းကြွက်များတွင် serotonin reuptake ပို့ဆောင်ရေးစကားရပ်လျော့နည်းသွားသည်။ neuroscience Res ။ 2007; 58: 32-9 ။ [PubMed]
14 ။ Lee က JH ကင်မ် JY, Jahng JW ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားအရေးပါတယ်လို့အစားအစာမွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာ၏အတှေ့အကွုံအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့် HPA ဝင်ရိုးကမောက်ကမဖြစ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Endocrinol Metab (ဆိုးလ်) 2014; 29: 169-78 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ le Fleur SE, Houshyar H ကို, ရွိုင်းအမ် et al ။ ဝက်ဆီ၏ရှေးခယျြမှု, ဒါပေမယ့်မရစုစုပေါင်းဝက်ဆီကယ်လိုရီ, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ဖို့ adrenocorticotrophin တုံ့ပြန်မှု damps ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2005; 146: 2193-9 ။ [PubMed]
16 ။ Teegarden SL, ဘေးလ် TL ။ အစားအသောက် relapse အဘို့အစိတ်ပိုင်းများနှင့်စွန့်စားမှုတိုးလာအစားအသောက် preference ကိုအသီးအနှံအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ Biol Psychiatric ။ 2007; 61: 1021-9 ။ [PubMed]
17 ။ Desmet pm တွင်, Schifferstein HN ။ အစားအစာကိုအတှေ့အကွုံအတွက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများသတင်းရင်းမြစ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2008; 50: 290-301 ။ [PubMed]
18 ။ Buwalda B, Blom WA, Koolhaas JM ။ et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအထီးကြွက်များတွင် High-အဆီနို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2001; 73: 371-7 ။ [PubMed]
19 ။ Pecoraro N ကို, Reyes က F, ဂိုမက်ဇအက်ဖ် et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်သက်ရောက်မှု: နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ဖိစီးမှုလက္ခဏာလျော့နည်းစေသည့်အရေးပါတယ်လို့နို့တိုက်ကျွေးရေး, အားပေးအားမြှောက်။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2004; 145: 3754-62 ။ [PubMed]
20 ။ Prasad တစ်ဦးက, အဆီကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာ၏ Prasad C. က Short-term စားသုံးမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1996; 60: 1039-142 ။ [PubMed]
21 ။ Salamone JD, အားဖြည့်များ၏ကော်ရဲရားအမ်လှုံ့ဆျောမှုအမြင်များ: နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့သက်ရောက်မှုတွေ dopamine accumbens ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 137: 3-25 ။ [PubMed]
22 ။ di Chiara, G, Loddo P ကို, နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုမှ prefrontal နှင့် limbic dopamine တုန့်ပြန်အတွက် Tanda G. အအပြန်အလှန်အပြောင်းအလဲများ: စိတ်ကျရောဂါ၏ psychobiology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Biol Psychiatric ။ 1999; 46: 1624-33 ။ [PubMed]
23 ။ Yadid, G, Overstreet DH, စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုကြွက်မော်ဒယ်တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုနှိုးဆွဖို့ Zangen အေ Limbic dopaminergic လိုက်လျောညီထွေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 896: 43-7 ။ [PubMed]
24 ။ Imperato တစ်ဦးက, Angelucci L ကို, Casolini P. et al ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများကွဲပြားခြားနားစိတ်ဖိစီးမှုစဉ်နှင့်အောက်ပါ limbic dopamine လွှတ်ပေးရန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 577: 194-9 ။ [PubMed]
25 ။ Saal: D သည် Dong Y ကို, Bonci အေ et al ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 37: 577-82 ။ [PubMed]
26 ။ da Cunha IC, Lopes APF, Steffens သည် SM ။ et al ။ Shell, ဒါပေမယ့်မ accumbens core ကိုစ accumbens သို့ AMPA အဲဒီ receptor ရန်၏ microinjection, စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် anxiolysis ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2008; 188: 91-9 ။ [PubMed]
27 ။ Kochenborger ငါ Zanatta: D, Berretta LM ။ et al ။ ယင်းနျူကလိယတစ်ဦး-adrenoceptor agonist microinjections အောက်ပါကွောကျရှံ့ခွငျး / စိုးရိမ်ပူပန်တုံ့ပြန်မှု၏ Modulation, ဒါပေမယ့်မရအစားအစာစားသုံးမှုအခမဲ့နို့တိုက်ကျွေးရေးကြွက်များ၏အခွံ accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2012; 62: 427-35 ။ [PubMed]
28 ။ Jahng JW, Ryu V ကို, Yoo SB ။ et al ။ စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန် Mesolimbic dopaminergic လှုပ်ရှားမှုမွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာကြုံတွေ့ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ပါတယ်။ neuroscience ။ 2010; 171: 144-52 ။ [PubMed]
29 ။ Cordeira JW, ဖရန့် L ကို, Sena-Esteves အမ် et al ။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်အဆိုပါ mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် hedonic နို့တိုက်ကျွေးရေးထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 2533-41 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Xu B, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် Eh, Zang K. et al ။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် melanocortin-4receptor ၏မြစ်အောက်ပိုင်းစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 736-42 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB: စွဲများအတွက်တစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 11042-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Teegarden SL, Nestler EJ, ဘေးလ် TL ။ dopamine အချက်ပြအတွင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB-mediated ပွောငျးလဲတစ်အရေးပါတယ်လို့ High-အဆီဓာတ်စာအားဖြင့်ပုံမှန်ရှိပါသည်။ Biol Psychiatric ။ 2008; 64: 941-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Kim က HJ, Lee က JH, Choi SH ။ et al ။ arcuate NPY mRNA နှင့် plasma corticosterone ၏အစာရှောင်ခြင်း-သွေးဆောင်တိုးမွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာကြုံတွေ့ကြွက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေနေကြသည်။ Neuropeptides ။ 2005; 39: 587-94 ။ [PubMed]
34 ။ Ryu V ကို, Lee က JH, Yoo SB ။ et al ။ မွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာကြုံတွေ့ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ထော hyperphagia ။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း။ 2008; 32: 1355-62 ။ [PubMed]
35 ။ Ryu V ကို, Yoo SB, Kang DW ။ et al ။ post-နို့ဖြတ်တဲ့အထီးကျန်မှုတွေမွေးကင်းစကလေးများမိခင်ခွဲခြာကြုံတွေ့ကြောင်းကြွက်များတွင်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ်ကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဦးနှောက် Res ။ 2009; 1295: 127-34 ။ [PubMed]
36 ။ Kalueff AV စနစ်, Aldridge JW, LaPorte JL ။ et al ။ neurobehavioral စမ်းသပ်ချက်အတွက်မြောကျမတို့ microstructure လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။ နတ် Protoc ။ 2007; 2: 2538-44 ။ [PubMed]
37 ။ Daniels WM, Pietersen CY, ME Carstens ။ et al ။ ကြွက်များတွင်မိခင်ခွဲခြာစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်တုံး ACTH တုံ့ပြန်မှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြောင်းလဲ neurotransmitter အဆင့်ဆင့်ဦးတည်သွားစေ။ Metab ဦးနှောက် dis ။ 2004; 19: 3-14 ။ [PubMed]
38 ။ Porsolt RD, က Le Pichon M က, Jalfre အမ်စီးပွားပျက်ကပ်: လက္ခဏာကုသမှုမှအထိခိုက်မခံအသစ်တစ်ခုကိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ သဘာဝ။ 1977; 266: 730-2 ။ [PubMed]
39 ။ Choi YJ ကင်မ် JY, Jin က WP ။ et al ။ ဦးနှောက်မှပါးစပ်အာရုံခံ relay ကို၏နှောင့်အယှက်ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Arch ခံတွင်း Biol ။ 2013; 58: 1652-8 ။ [PubMed]
40 ။ Jahng JW, Yoo SB, Ryu V. et al ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူမှုရေးအထီးကျန်နေဖြင့် Hyperphagia နှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ။ int J ကို Devl neuroscience ။ 2012; 30: 47-53 ။ [PubMed]
41 ။ Lee က JY ကင်မ် JY, Ryu V. et al ။ Bicuculline နာတာရှည် ameliorated, ဒါပေမယ့်မရစူးရှ, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးဖိနှိပ်မှု။ int J ကို Pharmacol ။ 2015; 11: 335-42 ။
42. Faraday MM, O'Donoghue VA, Grunberg NE ။ Sprague-Dawley နှင့် Long-Evans ကြွက်နှင့်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်နီကိုတင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2003; 74: 325-33 ။ [PubMed]
43 ။ Wigger တစ်ဦးက, နျူမန် ID ကို။ periodic မိခင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမ-မှီခိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1999; 66: 293-302 ။ [PubMed]
44 ။ Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG ။ et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10594-602 ။ [PubMed]
45 ။ တံဆိပ်ခေါင်းဂျာ Mashoodh R ကို, ဗန် Kampen JM ။ et al ။ အစားအသောက်ကန့်သတ်သည့်ကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်အထွတ်အထိပ် corticosterone အဆင့်ဆင့်, ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့် deltaFosB စကားရပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 2008; 1204: 94-101 ။ [PubMed]
46 ။ Vialou V ကို, Cui H ကို, Perello အမ် et al ။ ကယ်လိုရီကန့်သတ်-သွေးဆောင်ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများအတွက်ΔFosBတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Biol Psychiatric ။ 2011; 70: 204-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ Benavides DR, Bibb ဂျေအေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် plasticity အတွက် Cdk5 ၏အခန်းက္ပ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1025: 335-44 ။ [PubMed]
48 ။ Bogush တစ်ဦးက, Pedrini S က, Pelta-Heller ဂျေ et al ။ AKT နှင့် CDK5 / p35 စသည်တို့အတွက်အလတ်စားအရွယ်အစား spiny အာရုံခံအတွက် DARPP-32 ၏ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် induction ဖျန်ဖြေ။ J ကို Biol Chem ။ 2007; 282: 7352-9 ။ [PubMed]
49 ။ Svenningsson P ကို, Nairn AC အ, Greengard P. DARPP-32 အလွဲသုံးစားမှုမျိုးစုံမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ရပ်များ mediates ။ AAPS ဂျေ 2005; 7: E353-60 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Bessa JM, မိုရေးမြို့ထဲ M က, Marques အက်ဖ် et al ။ Stressinduced anhedonia နျူကလီးယပ် accumbens ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံ၏ hypertrophy နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဘာသာပြန်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 3: e266 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ Krishnan V ကို, ဟန် MH, ဂရေဟမ် DL ။ et al ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်ဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ခုခံရေးအခြေခံမော်လီကျူးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ cell ။ 2007; 131: 391-404 ။ [PubMed]
52 ။ Weiss က F, Ciccocioppo R ကို, Parsons LH ။ et al ။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse ။ Neuroadaptation, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အေးစက်အချက်များ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001; 937: 1-26 ။ [PubMed]
53 ။ Donahue RJ, Muschamp JW, Russo SJ ။ et al ။ ကြွက်များတွင်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anhedonia အပေါ် striatal ΔFosB overexpression နှင့် ketamine ၏ဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 76: 550-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ ဟေးလ် RA, Klug M က, Von မြေဆီ SK ကို။ et al ။ တစ်ဦး "နှစ်ခု hit" ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် Spatial memory နဲ့ anhedonia အတွက်လိင်-တိကျတဲ့ပြတ်တောက် hippocampal ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်စကားရပ်များနှင့်အချက်ပြမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်အတူကိုက်ညီတဲ့။ Hippocampus ။ 2014; 24 (10): 1197-211 ။ [PubMed]
55 ။ Lippmann M က, Bress တစ်ဦးက, Nemeroff သမဝါယမ။ et al ။ ကြွက်များတွင်မိခင်ခွဲခြာနှင့်ဆက်စပ်ရေရှည်အမူအကျင့်များနှင့်မော်လီကျူးကိုပြောင်းလဲ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2007; 25: 3091-8 ။ [PubMed]
56 ။ Hanson ND, Owen MJ, Nemeroff သမဝါယမ။ စီးပွားပျက်ကပ်, စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့် neurogenesis: အရေးပါသော reappraisal ။ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 2589-602 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ Sahay တစ်ဦးက, စိတ်ကျရောဂါအတွက် Hen R. အရွယ်ရောက် hippocampal neurogenesis ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1110-5 ။ [PubMed]
58 ။ Maniam J ကို, မောရစ် MJ ။ မိမိဆန္ဒအလျောက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အရေးပါတယ်လို့ High-အဆီဓာတ်စာနှစ်မျိုးလုံးအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့အထီးကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ပရိုဖိုင်းနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်: hippocampus ၏အခန်းက္ပ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2010; 35: 1553-64 ။ [PubMed]
59 ။ Macht M ကိုစမ်းသပ်သွေးဆောင်စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များအပေါ်ချောကလက်၏ Muller ဂျေချက်ချင်းသက်ရောက်မှု။ အစာစားချင်စိတ်။ 2007; 49: 667-74 ။ [PubMed]
60 ။ Willner P ကို, Benton: D, Brown ကအီး et al ။ တိရိစ္ဆာန်အတွက်ချိုမြိန်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်တဏှာ၏လူ့မော်ဒယ်များအတွက် "ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်" တိုး "တဏှာ" ။ Psychopharmacology ။ 1998; 136: 272-83 ။ [PubMed]
61 ။ Foster MT, သတိပေးချက်များကို JP, Ginsberg AB ။ et al ။ အာခေါင်အစားအစာများ, စိတ်ဖိစီးမှု, နှင့်စွမ်းအင်စတိုးဆိုင်များထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြီးနောက် corticotropin-releasing အချက်, adrenocorticotrophin နှင့် corticosterone ပြင်းအားပနျးပုထု။ Neuroendocrinology ။ 2009; 150: 2325-33 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ Figlewicz DP, အီဗန် SB, Murphy ကဂျေ et al ။ ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာ / substantia nigra (VTA / SN) တွင်အင်ဆူလင်နှင့် leptin များအတွက် receptors ၏ (Expression ဦးနှောက် Res 2003; 964: ။ ။ 107-15 [။PubMed]
63 ။ Figlewicz DP, Szot P ကို, ချားဗေ့စ်အမ် et al ။ Intraventricular အင်ဆူလင်ကြွက် VTA / substantia nigra အတွက် dopamine Transporter mRNA တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1994; 644: 331-4 ။ [PubMed]